Kodzero-dzevanhu, 14 Nyamavhuvhu 2019
Chitatu 14 Nyamavhuvhu 2019
Hurumende Yonetseka neKuratidzira kweMDC neChishanu
Hurumende iri kushushikana zvikuru nehurongwa hwebato rinopikisa reMDC hwekuratidzira nemusi weChishanu
Vana Chiremba Voronga Kuramwa Mabasa Zvekare
Sangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ranyora tsamba kuhurumende richiizivisa kuti vanachiremba vari kuzombomira kuenda kubasa sezvo mari dzavo dzisisakwane.
MDC Inoti Kuratidzira Kwayo Kuri Kuenderera Mberi neChishanu
Bato reMDC rinoti kuratidzira kwarakaronga kuti kuitwe neChishanu kuri kuenderera mberi zvisinei nemashoko ari kutenderera ekuti kuratidzira uku kwakanzurwa.
Kuwaniswa kweMagwaro Kwotarisirwa Kubatsira Mhuri Dzakabva kuZimbabwe Dzigere muKenya
Rudzi rwevaShona urwu rwakatanga kupinda muKenya mugore ra1962 rwuchitungamirirwa naVaJohanne Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yepositori yeJohanne Masowe.
VaMnangagwa Vanorumbidza Mauto Vachiti Ari Kuchengetedza Runyararo Munyika
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika.
MDC Inoti Hurongwa Hwayo hweKuratidzira neMusi weChishanu Huri Mugwara
Sachigaro wevechidiki mubato reMDC, Va Tererai Obey Sithole, vanoti vachange vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira uku kusaite mhirizhonga.
Dunhu reMDC North America Roronga Kuratidzira muWashington D.C. neChishanu
Nhengo dzebato reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington D.C. nemusi weChishanu svondo rino dzichitsigira dzimwe nhengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero.
Vamwe Vanoti Zvakarwirwa Hondo Hazvina Kuzadzikiswa Sezvo Nhamo Yatekeshera
Apo Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba vamwe vanoti zvakarwirwa muhondo yerusununguko zviri kuzadzikiswa, asi vamwe vachitiwo kutambura kuri kuita vana veZimbabwe, chiratidzo chekuti nyika haisisiri mugwara raitarisirwa nevakarwira nyika.
Hama dzeMagamba Akafira kuChinhoyi Dzinoti Hurumende Yadzikanganwa
Dzimwe mhuri dzemagamba akafa muhondo yemuChinhoyi iyo yakatangisa hondo yechimurenga chakaunza rusununguko munyika dzinoti dzinofanirwa kupihwa ruyamuro sezviri kuitwa hama dzemamwe magamba.
Nyanzvi Dzinoti Kusarara neNyaya yeMagetsi Kunogona Kukonzera Zvirwere
Kudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi neZESA munyika yese kuchavhiringidza hutano hwevanhu vakawanda nokuti vanhu vazhinji havasi kuwana zororo sezvo varikushanda nguva dzavanenge vachifanira kunge vakazorora.
VaMnangagwa Vanoti Vanoda Runyararo Uku Vamwe Mubato Ravo Vachiti MDC Isaratidzire
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira kuti munyika muve nerunyararo uye kuti musaitwe zvemhirizhonga vachiti hurumende yavo iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika.